Paris Saint-Germain oo qorsho awood badan u diyaarisay Kylian Mbappe si uu u saxiixo heshiis cusub – Gool FM
(Paris) 17 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa geed dheer iyo mid gaaban u laaceysa sidii ay Kylian Mbappe kaga hor istaagi lahayd inuu ka dhaqaaqo sida laga soo xiganayo MARCA.
Kooxda Faransiiska ka dhisan ayaa Mbappe u balan qaadday inay siineyso mushahar la mid ah midka uu haatan Neymar Jr ka qaato kooxda kaasoo qiimo ahaan gaaraya 26 milyan oo gini sanadkii.
Naadiga Real Madrid ayaa si aad ah u dooneysay weeraryahanka xulka qaranka France tan iyo markii uu kasoo iftiimay naadiga AS Monaco oo uu kula guuleystay horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkii 2016/17.
Dhinaca kale, PSG ayaa xagaagan isku dayday inay la soo saxiixato midkood Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi kahor inta aysan ku hungoowin, waxayna sidaas darteed dooneysaa inaysan si sahal ah ku lumin xiddiga ugu mustaqbalka wanaagsan safkeeda ee Mbappe.
Inter Milan oo doonaysa inay la saxiixato daafac ka tirsan Kooxda Manchester United